The Best Doccuments of Rohingya Muslim, အကောင်းဆုံးရိုဟင်ဂျာ အထောက်အထားများ : Compiled by N.D.P.D. (Revised and New addition) | Danya Wadi
»သတင်းများ»The Best Doccuments of Rohingya Muslim, အကောင်းဆုံးရိုဟင်ဂျာ အထောက်အထားများ : Compiled by N.D.P.D. (Revised and New addition)
The Best Doccuments of Rohingya Muslim, အကောင်းဆုံးရိုဟင်ဂျာ အထောက်အထားများ : Compiled by N.D.P.D. (Revised and New addition)
Posted by danyawadi on March 1, 2013 in သတင်းများ, သမိုင်း, အထူးကဏ္ဍ, အထောက်ထားများ, ဆောင်းပါးများ, Photos
N.D.P.D. presentation for the native inhabitants (Whose Faith Is Islam) residing in Rakhine State (Arakan State) as the citizen by law and by natural or birth right as well as the indenous national of Republic of Union of Myanmar
Go to the Burmese Version – Link
(1) – (Burmese Version)
Very Important ရခိုင်ပြည်ရှိမွတ်ဆလင်များသည်သဘာဝအလျှောက်တိုင်းရင်းသား၊
နိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်း၊ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်သို့ တင်ပြသည့်စာတမ်း …
(2) – Old Addition (English Version)
In Respect Of The Fact The Local Islam’s Inhabitants Within Rakhine State Are Native Race And Citizen Of Myanmar Under Law : in English and Burmese version …
All atachments links here : to click under the link
ပူးတွဲထားသောစာရွက်စာတမ်းများကိုဖတ်ရှုရန်အောက် လင့် ကိုနှိပ်၍ဖတ်ပါ။
(1) – Attachments of Rohingyas’ doccuments (Part – 1):ရိုဟင်ဂျာအထောက်အထားဆိုင်ရာ ပူးတွဲစာရွက်စာတမ်းများအပိုင်း(၁)
(2) – Attachments of Rohingyas’ doccuments(Part – 2) ရိုဟင်ဂျာအထောက်အထားဆိုင်ရာ ပူးတွဲစာရွက်စာတမ်းများအပိုင်း(၂) …
(3) – Attachments of Rohingyas’ doccuments(Part – 3) ရိုဟင်ဂျာအထောက်အထားဆိုင်ရာ ပူးတွဲစာရွက်စာတမ်းများအပိုင်း(၃) …
(4) – Attachments of Rohingyas’ doccuments(Part – 4),ရိုဟင်ဂျာအထောက်အထားဆိုင်ရာ ပူးတွဲစာရွက်စာတမ်းများအပိုင်း(၄) …
(5) – Attachments of Rohingyas’ doccuments(Part – 5) ရိုဟင်ဂျာအထောက်အထားဆိုင်ရာ ပူးတွဲစာရွက်စာတမ်းများအပိုင်း(၅) …
← လှိုင်သာယာ ၁ ထိပ် ၃ ထိပ် ရပ်ကွက်ရှိ မွတ်စလင်မ်နေအိမ်များနှင့် ဆိုင်များ ဖျက်ဆီးခံရ
အမေရိကန် အောက်လွှတ်တော် မှာ မြန်မာပြည် လူ့အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ ကြားနာပွဲကျင်းပ →
2 comments on “The Best Doccuments of Rohingya Muslim, အကောင်းဆုံးရိုဟင်ဂျာ အထောက်အထားများ : Compiled by N.D.P.D. (Revised and New addition)”
Anonymous March 4, 2013 at 1:02 pm	Reply
[…] The Best Doccuments of Rohingyas in Burma, […]